Notes for Somali Residents
Notes Prepared by Mohamed Abdi Gouled
Ayaa lagu Tijaabin Doonaa Fayras Corona
26/3/2020 0 Faallooyin
Marka hore Xusuusnow Waxyaabaha soo socda:
1. Raac dhammaan talobixinta caafimaad si aad iskaga ilaaliso inaad fayraska u qaadatid ama aad u gudbisid dadka kale. Haddii aad taas ku dhaqantid ma jiro wax eed ah oo la xidhiidha arrintan sidaa darteed HA QARIN.
2. Haddii aad u maleynaysid inaad jiran tahay ama xanuunsanaysid, isla markiiba u sheeg ka-hortagga xarunta oo bilow inaad ka fogow dadka kale ee xarunta, oo ay ku jiraan xubnaha kale ee qoyska haddii ay suurtagal tahay.
3. Tijaabadu maaha qeyb ka mid ah daaweyntaada. Tijaabadu waa hab ay Saraakiisha Caafimaadka Dadweynaha ula socon karaan horumarka fayraska kana shaqeeyaan sidii loo joojin lahaa. Haddii ay jiraan dib-u-dhacyo xagga baaritaankaaga ama helitaanka natiijooyinka, Kani wax saameyn ah kuma yeelan doonto daaweyntaada. Markaad u maleyneyso inaad xanuunsan tahay, kala shaqee maamulka Xarunta is-go'doominta ama la xidhiidh dhakhtarka. Haddii aad xoog u xanuunsan tahay, waxaa lagu geyn doonaa cisbitaal waxaana lagugu daaweyn doonaa si ku habboon.
In la is Tijaabiyo ama Natiijooyinna MA JOOJIN KARO Daaweyntaada.
4. Shuruucda HSE ee imtixaanku waa sidan soo socota:
Waa inaad wacdaa GP-gaaga si loogu baaro baaritaan haddii aad Xumad/qandho leedahay (Xumad/qandho kulul - 38 darajo Celsius ama ka badan) ama qabow iyo mid ka mid ah astaamaha soo socda:
Qufac, kani wuxuu noqon karaa nooc qufac ah, mana aha oo keliya in la qalajiyo neefta oo yaraata
Haddii aad ka mid tahay kooxaha mudnaanta koowaad leh oo ay u malaynayaan inaad u baahan tahay baaritaan, waxay kuu diyaarin doonaan imtixaan.
Waxaad u baahan doontaa inaad gooni u baadho intaad sugeyso baaritaankaaga. Dadka reerkaaga ka tirsan waxay u baahan doonaan inay xaddidaan dhaqdhaqaaqooda.
Wac GP-gaaga. Ha aadin rugta GP-ga, farmasiga ama isbitaal. GP-gu wuxuu kugu qiimeyn doonaa Taleefanka.
Hubso in GP-gaagu kuu haysto lambarka moobaylka ee kugu habboon adiga. Tani waa sidaa darteed waxaan kula soo xidhiidhi karnaa fariin qoraal ah faahfaahinta baaritaankaaga.
Haddii aadan GP lahayn, GP kasta ayaa kuu diyaarin kara baadhitaan.
Ha wicin Taleefanada GP-ga saacadaha shaqada ka baxsan. Ma diyaarin karaan imtixaan.
HSELive ma dalban karto baarista coronavirus. Waa khadka macluumaadka.
Fariin caafimaad oo ku saabsan goobaha dadka magangalyo-doonka ah oo kasoo baxay Wasaarada Caddaalada.
Xarumaha tooska ah iyo Xarumaha Degdegga ah, waxa haga Waaxda Caddaaladda si ay u soo saaraan qolal go'doomin leh oo ka jawaabaya Covid-19. Waa mid ka mid ah cabbirrada qorshaha ku-meel-gaarka ah ee Wasaaradda, oo lagu qeexay fiidnimadan. Wasaaraddu waxay kala tashanaysaa HSE arrimaha ku saabsan ka hortagga suurta galka ah iyo talaabooyinka kaydka ee loogu talagalay dadka aadka u nugul bulsho ahaan ee Bilaashka Tooska ah iyo hoyga degdegga ah.
23rd March 2020 2:53PM
Way fiicantahay in la hadlo
> Kumaan nahay?
La-talinta Cairde waa mid aan ahayn dowli, hase yeeshee hawshaas waxa qabanaya urur madax-banaan oo bixiya taageerooyinka caafimaadka ee dhinaca maskaxeed oo bilaash ah, waxaana loogu talagalay dadka magangalyo-doonka iyo qaxootiga ee ka weyn 18 sano.
Waxaanu hiigsaneynaa in aanu bixinno adeeg xushmeeya adiga iyo dhaqankaaga gaarka ah, waxa la rumeysan yahay iyo waaya-aragnimada, taasoo ku siinaysa meel aamin ah oo laga wada hadlo waxyaabaha. Taasi waxay ku socotaa noloshaada.
> Waxaan qabanno
La-talintu waa meel qarsoodi ah oo aad adigu ku sugan tahay sahamin kara fikirkaaga, dareenkaaga, waxaad rumeysan tahay ama khibradaha in ka badan waqti taageerada dhageyste xirfad leh.
Waxaad la kulmi doontaa la-taliyaha toddobaadkiiba hal mar saacad ku taal bartamaha magaalada Cork.
Adeeggu waa bilaash oo waxa lagu heli karaa luqadaha kala ah:
Ingiriisi, Faransiis, Ruush, Jarmal, iyo Boortaqiis
> Waxaanan sameyn karin
> La-taliyuhu kuu sheegi maayo waxa la sameeyo.
> Kuma siin karno daawo, ku siin karno
> Qiimeyn cilmi nafsi ama ogaansho.
> Kuuma siin karno talo sharciyeed.
From Irish Times 22 MarcH 2020 -/>
Magangelyo-doonka dhibaataysan waa in laga Raraa Xarumaha
Magangalyo-doonka waa in laga raraa xarumaha bixinta tooska ah “si degdeh/daahid la'aan” si looga fogaado inuu xanuunkani ku xafido ama ku faafo qaar ka mid ah kuwa ugu nugul Gobolka.
Mid kamid ah dhakhtiirta Magaalada Cork oo lagu magacaabo digay.
Dr Eamonn Faller, ahna khabiirta diiwan galinta cudurada faafa ee Isbitaalka Jaamacadda Cork, ayaa ku tilmaamay xarumaha bixinta tooska ah inay yihiin “boodhadhka buda/ ilaha uu kasoo burqan karo cudurka Covid-19”, waxaanu Doctorku sheegay in Dowladdu aanay ku baaqi karin fogeynta bulshada, halka xarumaha magangalyo-doonkana uu ku tilmaamay goobo ay ka jirto “rajo xumo”.
Waxa kaloo uu intaasku daray "Waxaa jira dad badan oo nugul oo si toos ah ugu jira kuwaasoo aan haysan dariiq ay ku kala baxaan," ayuu yidhi Dr Faller. Ka kaxaynta dadkan xarumahan runtii waa lama huraan waana in la sameeyaa dib u dhac la'aan.".
Digniintan ayaa timid kadib markii dadka degan xarunta tooska ah ee galbeedka wadanka lagu wargaliyay in qof magangalyo-doon ah oo xarunta jooga uu tijaabiyay cudurka Covid-19.
Waxyaabaha aad sameyn karto si aad u caawiso -/>
22nd March 2020 15:34PM
Tirada Dhimashda Cudurka coronavirus iyo Wadanka Spain
Dawladda Spain, ayaa ku dhawaaqday 394 dhimasho oo cusub oo uu sababay cudurka loo yaqaan 'coronavirus', taasoo kor u kacday tirada dhimashadana ka dhigtay 1,720 tirada, waxay arintaasina dalka ka dhigtay inuu noqdo dalka labaad ee ugu xun Qaaradda Yurub, kadib wadanka Talyaaniya.
Tirada cusub ayaa ah 30% marka loo eego wadarta guud ee xisaabta boqolkeyda, waxayna taasi muujinaysaa kor u kaca tirada kiisaska la xaqiijiyay ee cudurka oo ah sidan 3,646, ama 14.6%, oo wadarta guud ka dhigan 28,572, sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka.
Waxa kaloo saraakiisha ka digayaan inuu cudurku sii kordhayo maalmaha soo socda. Sidoo kale waxa Cusbitaalada lagu daaweynayaa tiro lagu qiyaasay 1,785, kuwaasoo lagu hayo qeybaha daryeelka degdega ah, waxaana wararku intaa ku dareen inuu jiro walaac aad u badan oo ku saabsan dadka buux-dhaafka ah ee isbitaalada.
Wararkii u danbeeyay ee cudurka coronavirus iyo Jamhuuriyadda Ireland
Waaxda Caafimaadka ayaa xaqiijisay 102 kiis oo cusub oo ah 'Covid-19' oo ka jira dalka Irland, taasoo ka dhigeysa tirada guud ee kiisaska la xaqiijiyay cudurka coronavirus ee Jmhuuriyadda Ireland 785.
Qoraal ka soo baxay Kooxda Gurmadka Caafimaadka Dadweynaha ee Degdega ah, ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in 584 kiis oo baadhis lagu sameeyay illaa iyo saqda dhexe ee Khamiista lagu ogolaaday in dadka cudurkani asiibay 55% rag ahaayeen, halka 44% ay ahaayeen haween.
19th March 2020 2:00PM
Sida loo dhaqo gacmahaaga -/>
19th March 2020 12:30hrs
Walaalayaal fariintan caafimaad waxay ku saabsan tahay astaamaha cudurka lagu garto iyo sidoo kale waajibaadka laga rabo qof kasta inuu sameeyo si uu cudurka uga badbaado.
Ilaahay ha ina badbaadiyo. Aamiin
Six new Covid-19 cases in NI, schools to close Friday
RTE NEWS -/>
Wararkii u danbeeyay ee xaalada cudurka coronavirus ee Jamhuuriyadda Ireland
Lix kiis oo cusub oo ku saabsan cudurka loo yaqaan 'Covid-19' ayaa laga xaqiijiyay Woqooyiga Ireland, taasoo tirada guud ee kiisaska gobolka ka dhigaysa 68.
Wadarta tirada tijaabooyinka ee la dhammaystiray Waqooyiga Ireland waa 1,482.
Waaxda Caafimaadka ee Waqooyiga Ireland ayaa markale ku talisay in dadka leh astaamaha khafiifka ah, sida qufac joogto ah / ama qandho, ay joogaan guryahooda, iyaga oo keli-keli ah.
Asxaabta muhiimada group ku waxay tahay in aynu dadkeena ka wacyigelino khatarta cudurka coronavirus.
Fadlan faraha dhaq/Maydh mar walba
Ka dheerow goobaha dadku ku badan yahay
Ku ekow gurigaaga waa inaad yaraysaa la kulanka dadka badan.
Cabinet signs off on emergency Covid-19 legislation
Warar cusub oo ku saabsan xaalada cudurka coronavirus iyo dhaqdhqaaqyada dawlada Ireland.
Golaha Wasiirada Ireland ayaa gaadhay tallaabooyinka u oggolaanaya dadka in laga xidho lugaha hadii ay u hoggaansami wayaan talabixinta caafimaadka we ka xidhiidha cudurka, gaar ahaan kuwa qabaan coronavirus-ka 'Covid-19' ee diida inay is-keliyeeyaan, go'aankaasna waxaa saxiixay Golaha Xukuumadda.
Golaha wasiirrada ayaa qabtay kulan aan loo dhanayn oo fiidnimadan caawa ah si ay uga baxaan sharci-dejinta deg-degga ah iyo xeerarka la xiriira dhibaatada Covid-19.
Wararka ku saabsan xaalada guud we cudurka coronavirus ee Ireland
69 xaaladood oo cusub oo coronavirus ah ayaa laga xaqiijiyey Jamhuuriyadda Ireland, 29 rag ah iyo 40 dumar ah, taasoo tirada guud ka dhigeysa 292. Kiisaska cusub, 48 waxay ka jiraan bariga dalka, 13 waa koonfurta, shan waxay ka jiraan waqooyi-galbeed saddexna waxay ku sugan yihiin galbeedka.